Vaovao - Fampahalalana momba ny fikojakojana sy fikojakojana welder cage
Fanontaniana 1: Ahoana no ahafahantsika mampihena ny akanjo anaovan'ny cage welder?
1. Ara-dalàna ireo mpanamboatra milina fantsom-boaloboka mitafy faritra mandritra ny fampiasana. Mba hampihenana ny akanjo eo anelanelan'ny ampahany dia tokony handinika ny antsipiriany isika mba hahafahan'ny fanatanterahana nymilina fantsom-boaloboka azo ampiasaina, ary ny mpiasa miasa ny milina fantsom-boaloboka mila mahafantatra tsara ny Operate ny milina mahay, mahafehy ny fizotran'ny asa sy ny fiasan'ny masinina, ary afaka mamaha ny olana amin'ny fotoana tsy ara-dalàna ny masinina, mba hiantohana ny ain'ny serivisy amin'ilay milina fantsom-boaloboka.
2. Mandritra ny fiasan'ny mpanamboatra milina tranom-borona, araho tsara ny fomba fiasa ary mandrara ny fandefasana entana be loatra, izay tsy hampitombo ny fiakanjoana eo anelanelan'ireo faritra ihany fa hanafaingana ny fahasimban'ny milina fantsom-boaloboka.
3. Rehefa miasa ny milina fantsom-boaloboka, fady ny hanafainganana ny hafainganam-pamokarana mba hanatsarana ny fahombiazan'ny asa, izay hiteraka haingo sy rovitra mifandraika amin'ny masinina ary hisy fiantraikany amin'ny androm-piainan'ilay masinina.
Fanontaniana 2: Ahoana no hisorohana ny tsy fahombiazan'ny milina fantsom-boaloboka mandritra ny fandidiana?
1. Voalohany indrindra, ny mpandraharaha ny milina fantsom-boaloboka ny mpanamboatra dia tsy maintsy manana teknolojia mahay, ary mety hahafantatra ny zava-bitan'ny milina fantsom-boaloboka, ary afaka mamaha ny olana amin'ny fotoana misy tranga tsy mahazatra, mba hialana amin'ny fahasimban'ny milina fantsom-boaloboka.
2. Ataovy ny asa fanaraha-maso alohan'ny fandidiana alohan'ny hampiasana ny milina tranom-borona, jereo tsara raha toa ka eo amin'ny sehatry ny asa mahazatra ny gara sy ny singa tsirairay ary mitatitra izay tsy ara-potoana ara-potoana.
3. Voarara ny asa be loatra mandritra ny fiasan'ny mpihaza tranom-borona. Ny asa be loatra dia tsy vitan'ny hoe vao mainka hanaratsy ny fitafy eo anelanelan'ny ampahany, fa koa hiteraka fahasimbana amin'ny mpihaingo tranom-borona.
4. amin'ny asa isan'andro, milina fantsom-boaloboka ny mpanamboatra dia mila mitazona tsy tapaka ny milina fantsom-boaloboka, mba hanitarana ny androm-piainan'ny serivisy sy hampihenana ny fisian'ny tsy fahombiazana.
Ireto voalaza etsy ambony ireto dia fanontaniana vitsivitsy izay namboarin'ny mpanamboatra milina tranom-borona ho anao. Manantena aho fa hanampy anao bebe kokoa. Raha tsy namaha ny fisalasalanao ity lahatsoratra ity dia afaka mamela hafatra mivantana ao amin'ny tranokala ianao hilaza aminay, hanapa-kevitra ny mpiasa fa hamaly anao ara-potoana izahay, misaotra anao amin'ny fanohananao.
Bolts amin'ny kalesy, U Bolts, Bolt firafitra, Hex Bolts, Masinina Sodina Pipe, Lag Bolts,